Serivisy sy mpamatsy VISA tsara indrindra | Hongyu
Ny System Generation VISIA® momba ny hoditra faha-7 dia manome traikefa tena nohatsaraina tamin'ny fakan-kevitra momba ny hatsarana sy ny fikolokoloana ny hoditra. Module fisamborana vao noforonina dia mihodina tsara manodidina ilay lohahevitra, manatsotra be ny fizotry ny sary ary manome fiononana bebe kokoa ho an'ny mpanjifa. Ny rindrambaiko nohavaozina dia mamela ny fakana sary haingana kokoa amin'ny fanasokajiana karazana hoditra mandeha ho azy, ny fahitana ny endrika namboarina sy maro hafa.
"Manohiza ho mpamatsy vola eran-tany ny rafitra fakana sary nomerika, rindrambaiko fanaovana sary, ary serivisy fanohanana mifandraika amin'izany hanampiana ireo matihanina amin'ny fahasalamana amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny marary sy ny fitantanana ny valin'ny fitsaboana."
"Mba hanomezana kalitao avo lenta sy avo lenta, vahaolana amin'ny sary ho an'ny mpitsabo sy ny sehatry ny fahasalamana, tohanan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mbola tsy nisy toa azy."
"Amin'ny maha-orinasam-panompoana voalohany momba ny fifanarahana ho an'ny sary ara-pahasalamana, dia hanohy hametraka ny fenitra volamena amin'ny antontan-taratasy sy ny fanadihadiana ny valim-pitsaboana hamaritana ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina sy ny vokatra amin'ny marary izahay."
"Mba hanomezana fitaovana, fomba ary serivisy ilaina amin'ny sary sy ny sary ilaina amin'ny fanohanana ny fizotran'ny fanavaozana ny vokatra eo amin'ny sehatry ny fanafody, biolojika ary fitaovana fitsaboana amin'ny tontolon'ny lalàna ankehitriny."
Fanavaozana entin'ny mpanjifa
Amin'ny maha orinasa teknolojia antsika dia mamorona fananana teknolojia mitarika anay manokana izahay ary miaraka amin'ny indostria, akademia ary ivon-toerana fikarohana hamahana olana sarotra.
Mino izahay fa misy fiaraha-miombon'antoka mpanjifa tsy misy fangarony izay mampifandray anay amin'ny maha ekipa mitambatra antsika hiara-hiasa amin'ny vahaolana vaovao hanampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao sy hampiavaka anao amin'ny fifaninanana.
Izahay dia mandray ekipa madinidinika sy mivantana hanomanana drafitra haingana, prototype, iterate ary hahatratrarana valim-pifidianana.
Rafitra fitarafana tarehy ho an'ny fikarohana klinika
Miaraka amin'ny fotoana fisamborana haingana sy fomba maivana hazavana natao hanatsarana ny fahitana ireo endrika amin'ny hoditra, ny VISIA®-CR no fenitra amin'ny sary azo haverina amin'ny laoniny. Ny fampidirana am-pahamendrehana miaraka amin'ny Toolkit Fanadihadiana Sary VAESTRO® dia manome vahaolana famakafakana hoditra ho an'ny mpikaroka.
1, ny toerana anatiny sy ny jiro mahazatra mba hahazoana antoka fa mifanaraka sy miverina ny toe-javatra misy ny sary tsirairay.
2, sary spektraly isan-karazany: ny fampiharana hazavana fotsy manara-penitra, jiro polarization cross-section ary hazavana ultraviolet ho an'ny sary multispectral handrefesana ny hoditry ny hoditra sy ny fepetra ambanin'ny tany.
3. Teknolojia RBX Ny teknolojia RBX vaovao dia manome fomba vaovao tsy mahazatra amin'ny famoahana, fandinihana ary famakafakana ny pigmentia sy ny lalan-dra.
Teo aloha: Sofwave